आरम्भले गर्यो नयाँ बस्तीका विपन्नलाई खाद्यन्न सहयोग - Birat Post
» प्रदेश » मनोरन्जन अंक: 4244
आरम्भले गर्यो नयाँ बस्तीका विपन्नलाई खाद्यन्न सहयोग
Birat Post बुधबार, जेठ ०७, २०७७ मा प्रकाशित
मोरङ ७ जेष्ठ ।
आरम्भ नाट्य डबली कला साहित्य मञ्चले रतुवामाई नगरपालिका वडा नं. ९ नयाँवस्तीका अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । कोभिड १९ को संक्रमणका बेला लकडाउनका कारण प्रभावित टोलका अति विपन्न ८ घरपरिवारलाई राहत वितरण गरेको हो । चुलो बल्न समस्या भएका परिवारलाई राहत वितरण गरिएको मञ्चका सह–सचिव हरि नेपालले जानकारी दिए ।
राहतमा प्रत्येक परिवारलाई १५ के.जी. चामल, १ के.जी. दाल, १ प्याकेट नुन र एउटा सावुन वितरण गरिएको थियो । नयाँ बस्तीमा आठ घरपरिवारको चुलोमा आगो बल्न समस्या भएको सुचना संगै आरम्भ परिवारले उनिहरुको घरदैलोमै पुगेर राहत बाढेको हो । मन्चका अध्यक्ष समिर सुवेदीले विपन्न बर्गको घरमा चुलो बलोस भन्ने उदेश्यका साथ राहत वितरण गरेको बताए ।
कलाकारवाटै रकम तथा चामल संकलन गरी राहत सामाग्री जुटाएको सुवेदीले बताए । राहत वितरण कार्यक्रममा मन्चका सदस्यहरु गोमा लुईटेल, निशा खड्का, सन्जु भट्टराई सविन भट्टराई, रञ्जना बुढाथोकी लगायत सहभागी भएका थिए ।
नेपालमा शनिवारसम्म देशभर वर्षा हुने सम्भावना
नेपाल रेयूकाइद्धारा मोरङको कटहरीमा बृक्षारोपण